Cali Shucaac oo lagu xidhay Jigjiga - BBC Somali
Cali Shucaac oo lagu xidhay Jigjiga
Image caption Calanka Ethiopia
Wararka ka imanaya Magaala-madaxda gobolka ismaamulka Somalida ee Ethiopia, Jigjig, ayaa sheegaya in la xidhay, Cali Cabdile Xirsi, oo Cali Shucaac loo yaqaano.
Cali shucaac waxa uu ka tirsanaan jiray, saraakiishii hogaamin jirtay Jabhadihii soomalida ee la dagalaami jiray dowladii Dergiga ee Mingusta Xayle Maryam. Waxanu ahaa, sarkaal si weyn looga yaqaano, gobolka soomalida ee Itoobiya, mudo badana ka dagaalami jiray gobolkaasi.
Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dowlada ismaamulka soomalida ee itoobiya, balse waxaa BBC-da loo xaqiijiyay in Cali shucaac lagu xiray Xabsiga magaalada Jigjigaoo uu hada uu ku jiro,Cali Shucaac, oo in muddo ah ku noolaa dalka Sacuudiga.
Dhowaan ayuu Cali Cabdille Xirsi gobolka dib ugu laabtay, waxaana la sheegayaa in xariga Cali Shucaac, ay caqabad ku keeni karto, geedi socodka nabada ee hada gobolkaasi ka socda.